> Resource > Free > Top 5 Best Free MOV Video Joiners
Marka ay timaado in video tafatirka, waxaad u baahan kartaa joiner video ah oo kaa caawinaya in aad meelo kala duwan oo ka mid ah clips video xirmaan. Halkan waxaa ku qoran liiska ugu sareeya 5 joiners MOV lacag la'aan ah inuu kaa caawiyo inaad si fudud loo gaaro in.
Free Video magaabay Joiner
Kate ayaa Video Joiner
Free Video magaabay Joiner waa aalad free video oo kuu ogolaanaya inaad si ay u dhinto oo ay ku biiraan video files qaabab kala duwan. Waxay bixisaa xal toos ah marka aad u baahan tahay in laga soo gooyay oo qayb ka file video ama ku biiro dhowr videos wada. Waxaa ka shaqeeya hab aad u fudud oo isticmaala interface ka dhigaya habka fudud si ay u fuliyaan.
Interface Simple oo waxtar leh;
Easy in la isticmaalo oo xasiloon.
No dhisay-in ciyaaryahanka video;
Window waa mid aad u yar oo aan la resized karo.
Video qalabeed waa aalad tafatir oo dhan-in-mid online video ah inuu kaa caawiyo inaad si fudud aad xaalkaa video. Sidaa daraadeed, aad si fudud ku milmaan karo files badan galay track a video hal. Waxa ay taageertaa oo dhan qaabab video (3GP, AMV, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, M4V, MP4, MPEG, Mpg, dhexena, VOB, wmv) iyo gelineya inaad isbedel goobaha sare sida video iyo codec audio sameeyo , xallinta, heerka yara heerka, jir.
Miyuu xaddidaadda file (600 MB).
Kate ayaa Video Joiner waa aalad si xor ah loogu tala galay inuu kaa caawiyo inaad ku biiro laba ama in ka badan videos galay mid ka mid ah hal. Waxa ay taageertaa qaabab kala duwan oo ay ku jiraan video AVI, wmv, MOV, MPEG iyo qaar badan, si aadan u baahan yihiin barnaamijyo kala duwan si loogu badalo ka hor inta uusan ku biirin videos.
Easy in la isticmaalo.
Waxaad u baahan kartaa in la sameeyo diiwaan email.
Free Video Joiner waa video ku biiro qalab si sahlan loo isticmaalo oo taageera noocyada kala duwan ee ay ka mid yihiin videos AVI, wmv, MOV, MP4 iyo in ka badan. Sidaa daraadeed, aad si fudud ku biiri kartaa tiro aan xad lahayn ee files video qaabab kala duwan. Marka aad samayn in, waxaad awoodi doontaa inaad u ciyaaro oo dhan videos aad isku wada dheggan yihiin sidii ay ahayd oo kaliya mid ka mid ah. Si degdeg ah u shaqeeya oo ku hayaa tayada video.
Waxaa iman mayso ciyaaryahan warbaahinta ah.
In kasta oo ay tahay a video editor lacag la'aan ah, VSDC Video Editor muuqataa waxaana uu dareensan yahay sida kaliya hal xirfad leh. Waxay leedahay nooc ka mid ah style tafatirka waqtiga kuu oggolaanaysa in aad isu geeyo badan video clips qaabab kala duwan, ku dar kala guurka, oo iyaga u abaalmarin mashruuca dhamaystiran.
Haddii aad u baahan tahay xirfad dheeraad ah MOV video joiner ah, Wondershare Video Editor si weyn lagu talinayaa. Waxa ay taageertaa badan oo kala duwan oo ay ku jiraan qaabab video MP4, FLV, MOV, AVI, wmv iyo in ka badan. Sidaa daraadeed, waxaad ku biiri kartaa wada duwan videos la qasabno yar. Ku darista kala guurka iyo saamaynta kale ayaa sidoo kale taageeray.